bench Archives — UHAMBO LEE - SITE OFFICIAL
isitulo eside isitulo eside isitulo eside isitulo eside isitulo eside isitulo eside isitulo eside isitulo eside isitulo eside isitulo eside isitulo eside isitulo eside isitulo eside isitulo eside
Book kucatshulwe: Musa Umona kwesitulo
Ndandidlala Varsity ngaske kwisikolo aphakamileyo. Nantso ingxelo kwakuyinyaniso (ngaphandle kokuba ukundinyanzela ukuba ukuchaza umdlalo igama). Ndaya kwisikolo esincinane yabucala, kwaye ukuba ube ophezulu ofumene ibala iqela eyunivesithi. Ndiyamthanda umdlalo yomnyazi, kodwa mna ngcono kakhulu xa uyibukele kunokuba uyidlale. Ndiya kunibetha abadlali bangxole "C'mon!"Kuzo referees bonke-star ubuchule. Kodwa leyo kangangoko uya. Isikolo sam le ulawulo engaqhelekanga kuthekani ukudlala imidlalo ukwenzela ukuba bapase, nangona, ngoko ke kwanyanzeleka ukuba isuti usixhome intloko yam kukudana zonke ebusuku ngoLwesihlanu.
Esi zazisoloko ngokupheleleyo imidlalo ekhaya. abazali yimincili nabafundi-abaninzi kubo abahlobo mine- wabonisa ukuba ukuxhasa iqela. Ngelishwa, mhlawumbi wenza kangangoko umahluko umdlalo njengoko wenza. Ndiya ezitsho kungena bleachers ixesha nexesha, emangalisiwe iingcamango zabo bonke abantu, ingakumbi utata wam. Ndicinga waqonda ukuba babini si nje kukho ukubukela, kodwa kwenzeka ukuba isihlalo engcono.